7 Lezi zinto umnikazi wendlu yangasese ukwenza kanye ngonyaka
Uma uthenge womzalwane, udinga ukujwayela ukwenza yonke izinto eziningi. Ukunakekela izindlu ezinjalo wehlukile imisebenzi efulethini. Kodwa eminyakeni ukujwayela, futhi manje engenela, ungathanda ukushintsha, simi eyihlane izinyanga. Yiba aphethe wemfanelo! Qoqa amandla wenze konke okumele okuphindaphindiwe minyaka ukuletha endlini yayo ukuze ephelele.
Hlanza amashubhu kanye iplamu
Amapayipi kanye namadreni ophahleni aqoqana Kusaphazwa doti - amahlamvu ngisho namagundane efile! Konke lokhu kufanele kube unyaka ukuhlanza, ngoba ubumsulwa uhlelo abakhwabanisi kuyisihluthulelo ukuphepha kwe-ophahleni futhi nokususwa ke kweqhwa nemvula. Cabanga nje ngalokhu: ngokwanele ukubhekana inkinga isikhathi - futhi ungakwazi ukukhohlwa ngakho unyaka wonke!
Hlanza amatshe umusi
Yebo, ungumuntu wekugcina, ongeyena kakhulu udoti endlini. Noma kunjalo, zesitezi ngokudlulisa zanqwabelana, ikakhulukazi uma uhlala edolobheni seqhwa noma ezinothuli. Kubaluleke ngokufanayo ukuba afeze yokuhlanza nalabo labanebantfwana noma nezilwane. Sebenzisa isisi wezindlu ekhethekile, noma ushayele ochwepheshe ukujabulela ukhaphethi ukuthi libukeka nje ngosuku lokuqala emva ukuthenga!
Yebo, cishe nawe Sula iwindi, kodwa abaningi banawo ngakho ngaphakathi kuphela. Zama zihlanzwe nangaphandle, ukugeza sill iwindi kanye Uhlaka njengoba kufanele, okungenani kanye ngonyaka, ngisho noma ngabe kuthiwa zingavumi kakhulu.
Beka i-oda yakho zokugqoka
Yebo, lesi seluleko awasebenzi kuphela abanikazi ekhaya, kodwa lokho badinga ukuhlanza njalo, ukuze isikhala esiningi kungadala izinkinga ezinkulu ezinkulu. Qonda igumbi ngalinye ngamunye ngamunye, ukuthatha zonke izinto, futhi nizibheke.
Cishe, akunakwenzeka ukuba omakhelwane bakho like Amahlumela, amaqabunga yithela kusayithi yabo. Faka i-oda yakho phezu komhlabathi wabo, Ukunquma kwezihlahla notshani, susa amagatsha efile.
Call Service ukuze silwe izimuncagazi
Ucabanga ukuthi udinga ukubhekana amaphela kuphela uma kwenzeka ayehlasela ikhishi lakho? Wena okungalungile. Njalo yisevisi ekhethekile ukuhlola indlu, ukuze singathwesi uhlangabezana ke nge izinkinga eziningi ezinkulu.
Watch out for ukudayiswa izindlu lomgwaqo wakho
Ngisho noma ungenayo ukuhlela ukuhambisa, kube usesikhathini emakethe impahla kanye ngezikhathi ezithile, hlola amanani. Ngaphezu kwalokho, kuyoba lokwazi bangaki omakhelwane ezazikade zibiza ama endlini yabo entsha.
Kuyini ugodo ukunganakwa
Ukuluka ngensonto kwezihibe clove?
Adume Russian? Izinto zenani elikhulu zomuntu ezweni lethu
Yiziphi usana ifomula yokudla?
Mhlawumbe ngokushesha amarobhothi iyolawula amagciwane!